Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : /bins/ohabolana/alaina
Proverb 1460 Aza mitonantonana , toy ny hava-nalaina . [Cousins 1871 #668]
Mitonantonana , toy ny havana alaina . [Cousins 1871 #1882]
Proverb 1502 Aza ny hafohezan' ny andro no alaina , fa ny halavan' ny taona . [Veyrières 1913]
Proverb 1923 Faka vilon-dRenitalata : ny an-tsobiky tsy misy ka ny an-tongoany no alaina aloha. [Rinara 1974]
Proverb 1965 Fanambadian- -dRainimanafika , ka ny mody tsy alaina mba tsara ihany. [Rinara 1974 #1080]
Proverb 1967 Fanambadian' ny Manontalahy , ka ny mody tsy alaina mba tsara ihany. [Veyrières 1913 #1370, Houlder 1895]
Proverb 4864 Ny akaiky tsy alaina , fa ny lavitra no anganon-ganoina . [Veyrières 1913 #1578, Rinara 1974 #2837, Cousins 1871 #2131]
Proverb 4886 Ny alain' ny vavany maningotra ny tenany , ary ny alain' ny lelany maningotra ny lohany . [Cousins 1871 #2142, Rinara 1974]
Proverb 6192 Raha vazo mitovy ihany, ahoana no hita rano . [Rinara 1974 #3678]
Proverb 6632 Sokina anaty voaroy : hitan' ny maso fa sarotra alaina . [Houlder 1895 #1213]
Sokina anaty voaroy , ka hitan' ny maso fa sarotra alaina . [Rinara 1974 #3917]
Proverb 6680 Sora-damba napetaka amin’ ny maty : tsara tsy azo alaina . [Samson 1965 #S44]
Proverb 7267 Tongoa mihonkon-drazana tsy alain' ny andriana . [Veyrières 1913 #399]
Proverb 7421 Tsy alain' andriana tongoa mihonkona Antehiroka . [Veyrières 1913 #401]
Proverb 8187 Vidian-tsy azo, ka alai-mora foana . [Rinara 1974 #4948]
Proverb 8365 Vorontsiloza : tsy loza , nefa, raha alaina loza ihany. [Rinara 1974 #5049, Cousins 1871]